Fety tany Thailand ~ Journey-Assist - andro malaza. Taom-baovao
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Kolontsaina, Fivavahana, fialantsasatra ary filozofianan'i Thailand » Fialantsasatra any Thailand
30 martsa, 2020
Betsaka ny fialantsasatra any Thailand, na ara-pivavahana na ara-pivavahana. Ary ireo fialantsasatra rehetra ireo dia tsy azo atao fampisehoana akory. Ny firenena iray manontolo dia tsy misitraka miditra ao aminy ary mankalaza azy amin'ny fanahy! 🙂 Azonao atao ny manamarina izany raha mahita ny fialantsasatra manaraka ny dia mankany Thailand.
Songkran - Taom-baovao Thai
Daty - 12-14.04
Songkran any Thailand. Taom-baovao Thai
Taom-baovao, izay antsoina hoe Songkhran eto.mankalazà mandritra ny telo andro (12, 13 sy 14 aprily). Any Thailand, ireo andro ireo no fiandohan'ny planeta astronomika. Zatra ho an'ny vahoaka Thai ny handatsaraka rano amin'izy ireo mandritra ny fankalazana ny Songkhran.
Amin'izao andro izao, ny fombafomba ara-pivavahana ho fanomezam-boninahitra an'i Buddha dia tanterahina ihany koa.
Taona vaovao sy krismasy any Thailandy
Daty - 31.12 Desambra
Taom-baovao any Thailand
Miaraka amin'i Songkhran, ankalazaina eto izy ireo ary mahazatra amin'ny tontolo tandrefana Taom-baovao sy krismasy. Na izany aza, ampahany lehibe amin'ny mponina dia mahita azy ireo ho toy ny andro mahazatra, tsy manisa fialantsasatra. Na dia any amin'ny tanàn-dehibe aza dia voamariky be izy ireo, satria be ny turis no miangona ao.
Ny Taom-baovao dia naverina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fomba ofisialy tany Thailand ka hatramin'ny 31 desambra, niverina tamin'ny 1940, mba hanatsarana ny fifandraisana amin'ny firenena tandrefana.
Makha Bukhcha (Andro Sangha)
Daty - Febroary na Martsa
Makha Bukhcha. Thailand. Lanonana fanadiovana ny saina
Ny andro fialan-tsasatra dia mianjera amin'ny volana feno amin'ny volana fahatelo izay mianjera matetika amin'ny Febroary na martsa. Amin'ity andro ity, tsaroan'ny Bodista ny fihaonan'ireo arhats (1250 arhats) izay nivory teo alohan'ny Buddha tao anatin'ny fotoana iray nefa tsy nisy fifanarahana mialoha
Fetin'ny Royal Plowing tany Thailand
Daty - Mey
Fotoam-boajanahary an'ny tany tany Thailand
May ny volana fanokafana ny vanim-potoana fambolena vaovao. Nankalazaina tamin'ity volana ity mpanjaka andiany fialantsasatra.
Ny tena andro iray itazonana azy ao anatin'ny taona tsirairay dia faritan'ny mpanandro mpanjaka. Ny mpanjaka dia miasa toy ny lohan'ny mpiasa tany, izay nanao tany kely teo anilan'ny Lapan'ny Grande renivohitra ao an-drenivohitra miaraka amin'ny karama masina tamin'io andro io.
Mamboly ny vary ao an-dabokala nataony ny tovovavy. Na amin'ity andro ity aza, misy vinavinaina momba ny orana, izay tokony ho latsaka mandritra ny taona.
Fitsingerenan'ny andro nahaterahana, Andro Fahazavana, ary Andro Nirvana - Visakha Bucha
Daty - Mey na jona
Visakha Bucha - Idin amin'ny fety lehibe any Thailand
Tamin'ny volana Mey, nandritra ny volana feno, misy daty telo manan-danja kokoa mifandray amin'ny Buddha - ny andro nahaterahany, ny andro fahazavana ary ny andro nandehanan'ny Buddha ny nirvana (parinibbany). Ireo zava-nitranga rehetra ireo, araka ny finoana ny Thais, dia niseho tamin'ny andro iny ihany.
fankalazana Visakha Bucha dia miseho amin'ny volana faha-15 amin'ny andro faha-6 volana izay
Andron'ny reny ao Thailandy
Daty - 12.08 Desambra
fetin'ny reny tao Thailandy
Ny 12 aogositra dia mankalaza ny Fetin'ny Reny (tsingerintaona nahaterahan'i Sirikit).
Festival Phra Phansa any Thailand
Daty - Septambra na Oktobra
Ok Phansa any Thailand. Andro famaranana
Septambra ny volana farany amin'ny fotoanan'ny orana any amin'ny ankamaroan'ny firenena. Nankalazaina tamin'ity volana ity fialantsasatra Ok Pansa. Tapitra ity andro ity ary mifady hanina haingana ny Bodista. Across Thailand, Bodista mahatoky manome akanjo vaovao sy zavatra hafa ilaina amin'ny moanina. Ny fialantsasatra dia miaraka amina hetsika marevaka toy ny boaty regatta izay misy jiro mirehitra aminy.
Andro Sartthai (fahatsiarovana ny maty)
Daty - Septambra
Toraka ihany koa ny volana septambra Andron'i Sartthai. Fetin'ny Bodista fahatsiarovana ny maty.
Kathin Holiday any Thailand
Daty: Oktobra, Novambra.
Faharetany - 1 volana
Kathina any Thailand
Kathina - fialantsasatra maharitra iray volana ary nankalazaina tamin'ny volana Oktobra na Novambra, nifarana tamin'ny faran'ny fotoam-pijinjana ny vary. Amin'ny andro fialantsasatra dia mitsidika tempoly sy manolotra fanomezana ho an'ny moanina ny Bodista.
Loy Karthong festival tany Thailand
Daty - Novambra
Holiday Loy Krathong miaraka amin'ny famoahana rafts kely eo amin'ny renirano izay misy labozia. Ity fombafomba ity dia maneho ny fanafoanana ny olana rehetra amin'ny fiainana. Manerana ny fotoana ny fialantsasatra. Tamin'ny taona 2019 dia nianjera izy tamin'ny 19 Novambra.
Andron'i Dada tany Thailand
Daty - 05.12 Desambra
5 Desambra, andron'ny rain'i Thailand. Mazava tsara io daty io ary dinihina ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny King Rama IX, izay be fanajana indrindra tany Thailand.